Izindaba - ULLER
Esihlokweni sanamuhla sithathe isinqumo sokuyinikela kwabesifazane aba-5 abashushuluza eqhweni abenze umlando babusa iqhwa. Abesifazane esifanele ukubancoma ngempumelelo yabo yezemidlalo kanye neyabo, ababonga ngalokhu, baphakamise igama lamazwe abo emincintiswaneni ebaluleke kakhulu emhlabeni. Ngabe uzoyikhumbula?
Ukuqeqeshwa kwesiphambano: Thola amandla futhi uthuthukise ukusebenza kwakho ngokomzimba
Kwenzekile kuwe ukuthi usugijime isikhathi eside kepha noma ngabe uziqeqesha kanzima kangakanani, uzizwa sengathi isimo sakho somzimba asibi ngcono? Mhlawumbe, okudingayo ukukusebenzisa enkambisweni yakho yansuku zonke: the Ukuqeqeshwa Kwesiphambano. Sikutshela yonke imininingwane ngale ndlela ukuthola amandla nokuthuthukisa ukusebenza kwakho ngokomzimba.
Iqoqo lezingilazi zezemidlalo zeThunder: Kuyasebenza futhi kuphephile, thatha uhambo lwakho lwezemidlalo uye kwelinye izinga.
Yazi yonke imininingwane yeqoqo lethu lezingilazi zezemidlalo Ukuduma. Thola ukuthi sifike kanjani ekwakhiweni kwawo kanye nezimpawu ezizenza zihluke, zikunikeze izinzuzo ezinkulu kakhulu uma kukhulunywa ngomkhuba wakho wezemidlalo.
Abesabekayo INtaba iZocolan Ukukhuphuka amakhilomitha ayi-9,8 lapho ngisho nabagibeli bamabhayisikili abangochwepheshe bezwa imilenze yabo isha. Le ntaba ingenye yezintaba eziyishumi ezinzima kunazo zonke ezakha i- I-Italy iyajikeleza, lapho kuphela izimbangi ezinhle kakhulu ezikwazile ukunqoba isigaba ngasinye. Kokuthunyelwe kwethu namuhla sikutshela yonke imininingwane yalezi zindawo ezimbi kakhulu ezinikezwa ukwakheka kwezwe lase-Italy.
Wake wezwa ngaye ngaphambilini Ukugula okuphezulu? Yigama elijwayelekile elithola iqoqo lezimpawu esihlangabezana nazo lapho siqala ukuqeqeshwa ngaphezu kwamamitha ayi-2400 ukuphakama. Into enhle ukuthi singakugwema uma sizilungiselela ngaphambili ngaphambi kokulayisha ifayela le- i-montaña. Esihlokweni sethu namuhla sikufundisa konke odinga ukukwazi!
Imizila engcono futhi enhle kunazo zonke yokwenza i-MBT eYurophu. Amapharadesi ngaphakathi kwezintaba kusuka kuHam Route eSpain, adabula amaFjords eNorway, kuya eRoyal Deeside eScotland, okuzokunikeza ukuzidela, imihlaba kanye nenkululeko. Yazi yonke imininingwane ngale mizila ethile.
Umhlahlandlela ophelele wakho konke odinga ukukwazi ngeCamino de Santiago. Kokuthunyelwe kwethu namhlanje ngeke sikufundise imizila emi-4 kuphela, kodwa sizokunikeza nokhiye bokwenza lolu hambo oluheha izinkulungwane zabahloli emhlabeni wonke unyaka nonyaka, kodwa kulokhu: ngebhayisikili! Ilungiselelwe?
Khuphukela E-Everest Base Camp ngebhayisekili, Akunakwenzeka? Hhayi-ke, kuzwakala kungasile, abasubathi abanamkhawulo! Futhi, lena yindaba yesinye sezenzo ezinhle zika-Omar Di Felice, umgibeli wamabhayisikili wase-Italiya owaphonsela inselelo ukujwayeleka kwemizila yokuhamba ngebhayisikili, ukuyinikeza ukuthinta okuthakazelisa kakhulu futhi okungcono! Ukubhala phansi konke ukushaywa yiphedi akwenzile.
Uzizwe uthulisa lelozwi elincane ekhanda lakho, lapho usuzoqeda isekethe lakho elijwayelekile, futhi lapho ungazelele khona, ufuna ukuma, uzizwe sengathi usukhathele futhi ngokungazelelwe ukuqina kuqala. Kuhle lokho, njengoba kubonakala kungokomzimba, kungokwengqondo. Sikukhombisa amanye amaqhinga wabasubathi abaphatha ukuqeqesha ingqondo ukuthulisa lelo zwi, ukuze ingqondo nomzimba wakho kube yithimba elilodwa.
1 2 3 4 Okulandelayo